युग संवाददाता । १३ भाद्र २०७८, आईतवार १८:०७ मा प्रकाशित
ओहो ! मन्त्रीज्यु एमाल्या युवा संघ र अनेरास्ववियुले त राजीनामा दिन बाध्य पार्छन् कि क्याहो गाँठे । मुख्यमन्त्रीलाई गुहारेर २४ घण्टाभित्र कृषि मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै पदबाट ननिकाले आन्दोलनाँ जाने भने त हँ ।
दुईतिहाइ ल्याका एमालेहरु सडकाँ आए भने त मन्त्री र मन्त्रीको प्रेस सल्लाकारको त भागाभाग होला त । हुन त मन्त्रीज्युका सल्लाकार नी कम्ता रैनछन् है । उनले लेख्या कुरा सामाजिक सन्जालाँ हेर्दा त “टाउको झोलाँ शरीर खोलाँ“ भनेर थर्काका प्रेस सल्लाकार नी त्यत्तिकै काँ भाग्लान र ? कालिकोटको चिसोपानी त्यसै पनि त खत्रै होला गाँठे । तर मन्त्री र प्रेस सल्लाकार जति बल्लिया भए नी अरिङ्गालको गोलो खन्निएछि कसैको केही लाग्नेवाला छैन ।
लौ जोड गर्नु है आन्दोलनकारी साथीहरु ! मैदानाँ आउने निर्णय गरीसकेछि त्यत्तिकै मैदान छोडेर भाग्ने त हैन होला नी ! दशा लाग्या बेलाँ यस्तै हो कृषि मन्त्रीज्यु जसरी कोरोनाका कारण कर्नालीका हामी जनता जसरी बेईलमी र बेरोजगार भएर के खाम्, केलाम् भाछम् अनि तपाइँहरु मन्त्रीका नाममा ऐस गर्दै हुनुहुन्छ । त्यो ऐसको अलिकति मात्रा त झर्नै परोनी हैन र ?
सांसद पद फुत्किएर नी मन्त्री भएर सरकारी ढुकुटियाँ फुतिफुति खेल्ने जुन अधिकार तपाइँलाई जनताले हैनकी मुख्यमन्त्रीले देकाथे । अब उनै मुख्यमन्त्रीले खोस्न पर्ने स्थिति आयो भनेनी रुवाबासी गर्न नपर्ने त होला नी । माओवादीका खत्रा नेता सभामुख जस्ता नेतालाई त यही बलात्कारको आरोप मात्रैले काँदेखि काँ पुर्यायो । तपाइँका आफ्नै आँखाले देख्याछ ।
त्यसैले कृषि मन्त्री ज्यु, युवाहरुलाई सडकाँ उतारेर पुलिस र युवालाई जुधाई रहनुभन्दा खुरुक्क मन्त्री पदाट राजीनामा दिनुस् । त्यसैमा तपाइँको नि कल्याण छ । राजीनामा दियो भने त म अपराधि ठहर्छु भोलियाट राजनीति गर्नै पाईन्न भन्ने चिन्ता लाग्या हो भने चिन्ता नगर्नाेस् । कस्ताकस्ता अपराधीले त राजनीति गरिराछन् । माननीय भैराछन् भने तपाइँलाई त आरोप मात्रै लाग्या हो । प्रमाणित त भैसक्या छैन नी ।
नेपाल ! अँझ त्यसाँनी कर्नाली प्रदेशाँ तपाईं जस्तो युवालाई कल्ले के गर्ने ? जुन प्रदेको ढुङ्गामाटो हावापानी सब चिज कमिनिष्ट छ । अनि त्याँ तपाइँलाई राजनीति गर्न के गाह्रो ? म त भन्छु अब राजीनामा दिन ढिला नगर्नाेस् मन्त्री ज्यु । बरु राजीनामा दिई हालेर यो लठारोबाट छुट्टी लिनोस् । यस्ताकाम जति लम्ब्यायो त्यति खति हुन्छ हैन र ?